Budata Overdrive City APK maka Android
Budata Overdrive City
Budata Overdrive City,
Mee ụlọ ụgbọ ala gị na nrọ gị na Overdrive City! Nka ọtụtụ ugbo ala, na-anakọta a dịgasị iche iche nke iconic ụgbọala na-emikpu onwe gị na mpi na ọduọ ọrụ mode. Gbanwee obodo gị Tycoon ka ọ bụrụ azụmaahịa azụmaahịa Motorsport zuru ụwa ọnụ.
Mepụta ụdị ụgbọ ala 50 site na Porsche, Ford, BMW na ụdị ndị ọzọ. Na-eju onye ọ bụla nọ nobodo gị anya ebe egwuregwu gị dị egwu, kpochapụwo na supercars. Nkwa dị iche iche nke ụgbọ ala, site na nchara nchara na eriri carbon, site na mgbochi engine na ụgbọ okporo ígwè.
Mepụta usoro omenala na onye nchịkọta vinyl ma họrọ site na ọtụtụ agba agba. Site na ịkwalite ụgbọ ala gị, mee ka ọsọ ya na arụmọrụ ya nokporo ámá na ọsọ ọsọ. Mee mbupu ebupu ma na-elekọta iwu nrụzi akpaaka; Na-akwado aha azụmaahịa ụgbọ ala esenidụt.
Overdrive City Ụdịdị